Yaadachiisa obboleeyyan keenya kan Sa’uudii keessa jirtaan hundaaf!! -
Yaadachiisa obboleeyyan keenya kan Sa’uudii keessa jirtaan hundaaf!!
bilisummaa March 29, 2017	2 Comments
Dejane Gutama irraa
Akkuma beekamu Mootummaan Sa’uudii dhiyeenya kana lammiiwwan biyyoota addaa addaa irra karaa seeraan alaatiin Sa’uudii seenan fi hayyama jireenyaa hin qabne ilaalchisee labsii haarawa baasuun beekamaadha.
Labsii kana irratti lammiiwwan hayyama jireenya hin qabneef karaa seeraan alaatiin seenan Roobii boruu March 29/2017 irraa kaasee ji’a 3 keessatti biyyattii lakkisanii akka bahan ibsameera.
Labsii kana ilaalchisee lammiiwwan biyya keenyaa Hayyamni jireenyaa irra kufe fi karaa seeraan alaatiin Sa’uudii seenaan bahuuf maaltu irraa eeggama kan jedhu irratti Qajeelfama Imbaasiin Itiyoophiyaa kan magaalaa Jiddatti argamu Afaan Amaaraatiin baase gara Afaan Oromootti jijjiiruun gabaabsinee isiniif qopheessinee jirra.
1. Namoonni sababa Hajjii fi Umraatiin Sa’uudii seentanii osoo hin bahin waraqaan (Vizaan) isinirraa kufe.
=> Osoo guyyaan kenname hin gahin buufata Xiyyaara kamiiyyuu deemuun bahuu kan dandeessan tahuu
=> wanti isin irraa eegamu passportaa fi Tikkeeta xiyyaara qofa.
2. Namoonni osoo labsiin kun hojii irra ooluu jal hin qabin(March 29/2017) duratti hayyamni jireenyaa irraa kufe ykn sababa Hojiin Sa’uudii seentanii hayyamni jireenyaa hin bahiiniif
=> Hojjachisaan (Namtichi qacare) kaffaltii hojjaataa(tuu) irraa eegamu kaffaluun Vizaa dhumaa akka argatu qabu godhaaf. Yoo adabbii qabaates hojjachiisatu kaffaluu qaba. Hojjetaan immoo guyyaan 90 kenname osoo hin dhumin daangaa ( buufata Xiyyaaraa ) kaminuu bahuu danda’a.
=> wanti irraa eegamu passporta fi tikkeeta Xiyyaaraa qofa.
3. Namoonni Hayyamaan alatti osoo sirna Hajjii raawwatan too’annaa jala oolan, karaa seeraan alaatiin kan Sa’uudii seenan, kan osoo labsiin kun hin labsamin dura nama isaan Hojjachiisan jalaa badan qaama dhimmi ilaallatu kan naannawa isaaniitti argamutti dhaquun Vizaa bahiinsaa dhahatuu ni danda’u.
=> wanti isaan irraa barbaadamu (Passporta ykn Liseepasa) achi booda osoo guyyaan kenname hin gahin Sa’uudii lakkisanii bahuu qabu.
4. Namoonni Balagaan irra hin jirre, kan Iqaamaa seera qabeessa qaban, kan sababa Nama isaan hojjachiisu hin beekneef labsii kana akka carraatti fayyadamuun bahuu barbaadan
=> Ministeera Dhimma Hojjataa(Maktaab Al Amal) jalatti kan argamu kutaa dhimma rakkoo hojjataa hiiku deemuun xalayaa fudhatuu
=> Xalayaa eega fudhatan booda Tarhiila naannoo saniitti argamu deemuun Vizaa ba’iinsa fudhatuu.
=> Ragaa isaan irra barbaadamu passporta qofa.
5. Namoonni dhaabbata itti hojjataa turanitti gocha seeraan alaa hojjatuu isaaniif hayyama dhorkaman
=> Biiroo Ministeera Hojii (Maktab Al A’maal) deemuun waraqaan eenyummaa waytawaa baafatuu.
=>Achi booda Biiroo Imigireeshiina naannawa isaanii deemuun Viizaa ba’iinsa fudhachuu.
=> wanti isaan irra barbaadamu (Passporta fi Waraqaa eenyummaa) erga fudhataan booda bahuu ni danda’u.
Odeeffannoo dabalataa yoo argane kan isaanii dabarsinu ta’a.
Previous A license to torture: Ethiopia – Torture and other ill-treatment
Next Waamicha Kora Uummataa Gurmuu Deeggarsa KFO irraa
Kuni tofta wayyanen motumma su’uditin wali galte tahun bekamadha
Kuni waan gudda nama dhiphisu natti hin fakkatu malif serri ama isaan basan kaan yeeroti male kan durimiti. kan dura chaptara mata isa qaba
Kanaf wahe fiza yeron irra deme kaan jedhanif sababa sanin nama walitti qabachufi male kuni waan addati miti
Akkasuma adabbin abba biyyalle kaama abba biyyati male kaan lammi kennati miti.kanaf of eggannon lammin kenya godhu qabu yammu qamni sera itti dhufu jala baqachu dhisu. Malif gara lubbu ofi dhabutti nama gessu dandaha wan tahef